Snapdragon 712: Qualcomm ရဲ့ mid-range processor အသစ် Androidsis
Snapdragon 712: အသစ် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Qualcomm သည်ပရိုဆက်ဆာအသစ်များနှင့်အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ Snapdragon 710 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်တွင်တိုးတက်လာသည့်အဆင့်မြင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်တစ်လုံး။ အခုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှာဒီပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုတွေ့ပြီ။ ဒီအကွာအဝေးအတွင်းမှာငါတို့တွေ့ပြီ။ Snapdragon 712 အကြောင်းပါ.
Snapdragon 712 သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အတူတူပါ တိုးတက်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ထားသည် အတူတူပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖုန်းများပေါ်တွင်ဂိမ်းများကစားရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့ကအလုံးစုံတိုးတက်မှု, ဤတိုးတက်မှုအာရုံစိုက်ပါ။
ကုမ္ပဏီမှဒီပရိုဆက်ဆာအသစ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကြီးမားသောခုန်ကျော်မှုကိုကိုယ်စားမပြုပါ အထူးသဖြင့်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်ထားပါသည် မာလ်တီမီဒီယာနှင့်ဂိမ်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီပရိုဆက်ဆာကိုမော်ဒယ်လ်အသစ်များအတွက်ဖွင့်ပေးနိုင်သည့်အရာသည်ယခုအခါ Android တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းသည်အရေးပါလာသည်မှာသေချာသည်။
1 Snapdragon 712 အသစ်
Snapdragon 712 အသစ်
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Snapdragon 712 သို့ပြောင်းလဲမှုများသည်မကြီးမားပါ။ ပထမဆုံးတွေ့ရှိရသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာ၎င်းသည်၎င်း၏နာရီကြိမ်နှုန်းတိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခင်မော်ဒယ်ထက်ပိုကြီးတဲ့ကတည်းက။ ဤဗိသုကာနှင့်တူညီသည်။ ရှစ် Kyro 260 core ကိုနှင့်အတူ။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ၂.၃ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Adreno 2,3 နှင့်အတူတူပင် GPU ကိုထိန်းသိမ်းသည်။
RAM ရဲ့ memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှာဘာအပြောင်းအလဲမှမရှိပါဘူး။ ၎င်းသည် Snapdragon 16 ၏ 710 GB ၌တည်ရှိသည်။ အပြောင်းအလဲများကိုမျှော်လင့်နိုင်သည့်နေရာသည်စွမ်းအားဖြစ်သည်၊ Qualcomm မှဖော်ပြချက်အရပြောကြားခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူ့အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စက်တွေထက်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ processor ကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပဲ။ ကုမ္ပဏီအရ Snapdragon 712 သည်ယခင်ထုတ်လုပ်သူများထက် ၁၀% ပိုမိုအားကောင်းသည်.
ဒါကတစ်ခုခုပါ ဂိမ်းကစားသည့်အခါအသုံးပြုသူများသည်အထူးသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် Snapdragon 712 ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းတဲ့စနစ်နှင့်အတူရောက်ရှိလာကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ၎င်းအတွက်၎င်းတို့တွင် Quick Charge 4+ ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ် protocol ဖြစ်သည်။ ယနေ့ Android တွင်အများအပြားထဲကတစ်ခု။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဒီ Qualcomm ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကအရင်မော်ဒယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးမပေးပါဘူး။ ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Snapdragon 712 သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောင်းလဲဘဲထားသွားသည်။ ၎င်းတွင် X15 modem တစ်ခုရှိသည် Download သည် 800 Mbps အထိမြန်နိုင်ပြီး upload 150 Mbps အထိရနိုင်သည်။ LTE အတွက်4×4MIMO နည်းပညာနှင့် WiFi အတွက်2×2နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။
Snapdragon 712 နှင့်အတူကင်မရာတွင်လည်းပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့ပင်၊ ကင်မရာများအတွက် 32 MP အထိ (သို့) 20 MP အထိထောက်ပံ့မှုသည်၎င်းသည်နှစ်ဆဖြစ်လျှင် ကိရိယာပေါ်တွင်ကင်မရာ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်၎င်းကိုရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် 4K resolution ဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျနော်တို့ပြီးသားတွေ့ဆုံခဲ့သည် Snapdragon 710 နှင့်အတူမော်ဒယ်အချို့ ပရိုဆက်ဆာအဖြစ် Xiaomi က Mi 8 Lite ကို သို့မဟုတ် Nokia က 8.1အခြားသူများအကြား။ ဒါပေမယ့်ဒီစျေးကွက်ထဲမှာမကြာခဏမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပရိုဆက်ဆာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ဤပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြင့်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်ထပ်မော်ဒယ်များတွင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အထူးသဖြင့် Android တွင်ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားများ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ။
ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုများအတွက် Snapdragon 712 ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိသေးပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင်ထုတ်လုပ်မှုစတင်မည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပရိုဆက်ဆာကိုမည်သည့်ဖုန်းများကပထမဆုံးအသုံးပြုကြမလဲဆိုတာအနည်းဆုံးတော့အခုအချိန်အထိမသိသေးပါဘူး။ မကြာခင်မှာဒီအချက်အလက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုသိရှိရန်အတွက်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Snapdragon 712: အသစ် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာ
Xiaomi Mi 8 Lite သည် Mi MIX3၏ Night Scene mode ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
Android Pie beta ကိုရယူလိုသော Axon9Pro သုံးစွဲသူများအတွက် ZTE သည်မှတ်ပုံတင်ဖွင့်လှစ်သည်